ड. शैतानको प्रभावलाई कसरी त्याग्ने र मुक्ति हासिल गर्ने सो सम्बन्धमा | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
ड. शैतानको प्रभावलाई कसरी त्याग्ने र मुक्ति हासिल गर्ने सो सम्बन्धमा
४८८. शैतानद्वारा भ्रष्ट भएपछि मानवजातिले परमेश्‍वरको भय मान्ने उनीहरूको हृदय साथै परमेश्‍वरको सृष्टिहरूको अनिवार्य कार्य गुमायो, त्यसैद्वारा उनीहरू परमेश्‍वरप्रति अनाज्ञाकारी शत्रु भए। त्यसपछि मानवजाति शैतानको अधिकार-क्षेत्रमा जियो र शैतानको आज्ञा अनुसरण गर्‍यो; यसरी, परमेश्‍वरसित आफ्नो सृष्टिहरू माझ काम गर्ने कुनै बाटो नै थिएन, र उनीहरूको भयपूर्ण आदरलाई जित्न उहाँ झनै असक्षम हुनुभयो। मानवलाई परमेश्‍वरले सृष्टि गर्नुभएको थियो, र उनीहरूले परमेश्‍वरको आराधना गर्नुपर्छ, तर वास्तवमा उनीहरूले उहाँतिर पिठ्यूँ फर्काए र सट्टामा शैतानको आराधना गरे। शैतान नै उनीहरूको हृदयको मूर्ति भयो। यसरी, परमेश्‍वरले उनीहरूको हृदयहरूमा उहाँको स्थान गुमाउनुभयो, भन्नुको मतलब, उहाँले मानवजाति सृष्टि गर्नु पछाडिको उहाँको अभिप्राय नै गुमाउनुभयो। यसकारण, उहाँले मानवजाति सृष्टि गर्नु पछाडिको अभिप्राय पुनर्स्थापना गर्न, उहाँले उनीहरूका मौलिक प्रतिरूप पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ र मानवजातिलाई उनीहरूको भ्रष्ट स्वभावहरूबाट मुक्त गर्नुपर्छ। मानवलाई शैतानको हातबाट पुनः फिर्ता ल्याउन, उहाँले उनीहरूलाई पापबाट मुक्त गर्नुपर्छ। यसरी मात्र परमेश्‍वरले क्रमिक रूपले उनीहरूको मौलिक स्वरूप र कार्य पुनर्स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, र अन्तमा, उहाँको राज्य पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ। मानवलाई परमेश्‍वरको उत्तम आराधना गर्न दिनको निम्ति र पृथ्वीमा उत्तम गरी जिउन दिनको निम्ति ती अनाज्ञाकारिताका सन्तानहरूको आखिरी विनाशलाई कार्यान्वयन पनि गरिनेछ। परमेश्‍वरले मानवलाई सृष्टि गर्नुभएको हुनाले, उहाँले उनीहरूलाई उहाँको आराधना गर्न लगाउनुहुनेछ; किनभने उहाँले मानवजातिको मौलिक कार्य पुनर्स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँले यसलाई पूर्ण रूपमा र विनामिसावट पुनर्स्थापना गर्नुहुनेछ। उहाँको अधिकारको पुनर्स्थापनाको अर्थ मानवजातिलाई उहाँको आराधना गर्न लगाउनु र उहाँको अधीनमा आउन लगाउनु हो भन्ने हुन्छ; यसको अर्थ परमेश्‍वरले मानवलाई उहाँको कारणले जिउन लगाउनुहुनेछ र उहाँको अधिकारको परिणामस्वरूप उहाँका शत्रुहरूलाई नष्ट हुन लगाउनुहुनेछ भन्ने हुन्छ। यसको अर्थ परमेश्‍वरले कुनै मानवबाट विनाप्रतिरोध मानव माझ उहाँ बारेको सबै थोकलाई दृढ रहन लगाउनुहुनेछ भन्ने हुन्छ। परमेश्‍वरले स्थापना गर्ने इच्छा गर्नुभएको राज्य उहाँको आफ्नै राज्य हो। उहाँले चाहनुभएको मानवजातिचाहिँ उहाँको आराधना गर्ने, पूर्ण रूपमा उहाँको अधीनमा रहने र उहाँको महिमा प्रकट गर्ने मानवजाति हो। यदि परमेश्‍वरले नै भ्रष्ट मानवजातिलाई मुक्त गर्नुहुन्न भने, मानवजातिलाई सृष्टि गर्नु पछाडिको उहाँको अभिप्राय नै गुम्नेछ; मानव माझ उहाँको अझै कुनै अधिकार रहनेछैन र पृथ्वीमा उहाँको राज्य अस्तित्वमा रहन सक्नेछैन। यदि परमेश्‍वरप्रति अनाज्ञाकारी भएका ती शत्रुहरूलाई उहाँले नष्ट गर्नुभएन भने, उहाँ उहाँको पूर्ण महिमा हासिल गर्न असक्षम हुनुहुनेछ, न त पृथ्वीमा उहाँको राज्य स्थापना गर्न नै सक्षम हुनुहुनेछ। उहाँको कामको र उहाँको महान्‌ उपलब्धिका पूर्णताका चिन्हहरू यी हुनेछन्: उहाँप्रति अनाज्ञाकारी ती मानवजाति माझका उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नु र पूर्ण बनाइएकाहरूलाई विश्राममा ल्याउनु।
४८९. प्रारम्भिक मानव जाति परमेश्‍वरको हातमा थियो, तर शैतानको परीक्षा र भ्रष्टताको कारण, मानिस शैतानको बन्धनमा पर्‍यो र दुष्टको हातमा पर्‍यो। तसर्थ, शैतान परमेश्‍वरको व्यवस्थापन कार्यमा पराजित गरिनुपर्ने पात्र बन्यो। शैतानले मानिसलाई आफ्नो वसमा पारेकोले र मानिस परमेश्‍वरले सबै व्यवस्थापन पूरा गर्न प्रयोग गर्नुहुने पूँजी भएकोले यदि मानिसलाई बचाइनु छ भने, उसलाई शैतानको हातबाट खोसेर फिर्ता लिनैपर्छ, अर्थात्, मानिसलाई शैतान कैदबाट फिर्ता लिनैपर्छ। यसैले मानिसको पुरानो स्वभावमा परिवर्तन ल्याएर शैतानलाई हराउनैपर्छ, यस्तो परिवर्तन जसले मानिसको सुरुको तर्कको अनुभूतिलाई पुनर्स्थापित गर्दछ। यस प्रकार जुन मानिस कैद बनाइएको छ, उसलाई शैतानको हातबाट खोसेर फिर्ता लिन सकिन्छ। यदि मानिसलाई शैतानको प्रभाव र बन्धनबाट मुक्त गरियो भने शैतान लज्जित हुनेछ, मानिसलाई अन्ततः फिर्ता ल्याइनेछ र शैतान पराजित हुनेछ। मानिस शैतानको अन्धकारको प्रभावबाट स्वतन्त्र भएकोले गर्दा, मानिस यो पूरै लडाइँको लुटको सामान बन्छ र लडाइँ समाप्त भएपछि शैतान दण्ड दिनुपर्ने पात्र बन्छ, त्यसपछि मानव जातिको मुक्तिको सम्पूर्ण काम पूरा भएको हुनेछ।
४९०. अँध्यारोको प्रभावमा जिउने व्यक्तिहरू ती व्यक्तिहरू हुन जो मृत्युको बीचमा जिउँछन्, र जसलाई शैतानद्वारा काबूमा राखिएको हुन्छ। परमेश्‍वरद्वारा मुक्त नगरिएमा र परमेश्‍वरद्वारा न्याय नगरिएमा र सजाय नदिइएका मानिसहरू मृत्युको प्रभावबाट उम्कन सक्दैनन्; तिनीहरू जीवित बन्न सक्दैनन्। यी “मृतक मानवहरू” परमेश्‍वरको साक्षी बन्न सक्दैनन्, न त तिनीहरूलाई परमेश्‍वरले प्रयोग नै गर्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूले राज्यमा प्रवेश गर्ने कुरा त परै जाओस्। परमेश्‍वरले जीवितहरूको साक्षी चाहनुहुन्छ, मृतहरूको होइन, र उहाँले जीवितहरूले उहाँको काम गरून् भन्नुहुन्छ, मृतकहरूले होइन। “मृत व्यक्तिहरू” ती व्यक्तिहरू हुन् जसले परमेश्‍वरको विरोध गर्छन् र परमेश्‍वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्छन्; तिनीहरू ती व्यक्तिहरू हुन् जो आत्मामा चेतनाशून्य छन् र परमेश्‍वरको वचनहरू बुझ्दैनन्; तिनीहरू ती व्यक्तिहरू हुन् जो सत्यताको अभ्यास गर्दैनन् र जोसँग परमेश्‍वरप्रति रत्तीभर बफादारीता छैन, र तिनीहरू ती व्यक्तिहरू हुन् जो शैतानको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत जिउँछन् र शैतानद्वारा शोषित हुन्छन्। मृत व्यक्तिहरूले सत्यताको विरोधमा उभिएर, परमेश्‍वरको विरुद्ध विद्रोह गरेर अनि तुच्छ, घृणायोग्य, दुष्ट, पाशविक, छली तथा धोखेबाज बनेर आफूलाई प्रकट गर्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूले परमेश्‍वरका वचनहरू खाने र पिउने गरे तापनि तिनीहरू परमेश्‍वरको वचनहरू अनुरूप जिउन सक्दैनन्; तिनीहरू जीवित भए तापनि तिनीहरू केवल हिँड्ने र सास फेर्ने लासहरू हुन्। मृत व्यक्तिहरू परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्न पूर्ण रूपमा असक्षम हुन्छन्, पूर्ण रूपमा उहाँको आज्ञापालन गर्ने कुरा त परै जाओस्। तिनीहरूले उहाँ विरुद्ध छल गर्न, उहाँको निन्दा गर्न, उहाँलाई धोखा दिन मात्रै सक्छन्, र तिनीहरूले आफू जिउने तरिका मार्फत जे ल्याउँछन् ती सबैले शैतानको प्रकृति प्रकट गर्छन्। यदि मानिसहरूले जीवित प्राणीहरू बन्न र परमेश्‍वरको साक्षी बन्न अनि परमेश्‍वरद्वारा स्वीकृत हुन चाहन्छन् भने तिनीहरूले परमेश्‍वरको मुक्ति स्वीकार गर्नुपर्छ; तिनीहरू खुशीसाथ उहाँको न्याय र सजायको अधीनमा रहनुपर्छ र परमेश्‍वरको काटछाँट र उहाँको निराकरणलाई खुशीसाथ स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र परमेश्‍वरले अनिवार्य गर्नुभएको सबै सत्यतालाई तिनीहरूले अभ्यास गर्न सक्‍नेछन्, अनि त्यसपछि तिनीहरूले परमेश्‍वरको मुक्ति प्राप्त गर्नेछन् र साँच्चिकै जीवित प्राणी बन्नेछन्। जीवितहरूलाई परमेश्‍वरले मुक्ति दिनुहुन्छ; तिनीहरूलाई परमेश्‍वरले न्याय र सजाय गरिसक्‍नुभएको हुन्छ, तिनीहरू आफूलाई समर्पित गर्न इच्छुक हुन्छन् र परमेश्‍वरको लागि आफ्नो जीवन त्याग्न खुशी हुन्छन् र तिनीहरूले खुशीसाथ आफ्नो पूरा जीवन परमेश्‍वरमा समर्पित गर्छन्। जब जीवितहरूले परमेश्‍वरको साक्षी दिन्छन् तब मात्र शैतानलाई लज्जित बनाउन सकिन्छ; जीवितहरूले मात्र परमेश्‍वरको सुसमाचार कार्य फैलाउन सक्छन्, जीवितहरू मात्र परमेश्‍वरको हृदय अनुसारका हुन्छन्, र जीवितहरू मात्र वास्तविक मानिसहरू हुन्। मौलिक रूपमा परमेश्‍वरद्वारा सृजित मानिस जीवित थियो तर शैतानको भ्रष्टताको कारण मानिस मृत्युको बीचमा अनि शैतानको प्रभावमा रहेर जिउँछ, र त्यसैले यसप्रकार मानिसहरू आत्माविहीन मृतक बनेका छन्, तिनीहरू परमेश्‍वरको विरोध गर्ने शत्रुहरू बनेका छन्, तिनीहरू शैतानका औजारहरू बनेका छन् अनि तिनीहरू शैतानका बन्दीहरू बनेका छन्। परमेश्‍वरद्वारा सृजित सबै जीवित मानिसहरू मृत मानिसहरू बनेका छन् र त्यसरी परमेश्‍वरले उहाँको साक्षी गुमाउनुभएको छ र उहाँले उहाँद्वारा सृजित अनि उहाँको सास भएको एकमात्र वस्तु मानवजातिलाई गुमाउनुभएको छ। यदि परमेश्‍वरले उहाँको साक्षी फिर्ता लिनु परेमा र उहाँको आफ्नै हातद्वारा सृजित भएका तर शैतानद्वारा बन्दी बनाइएका व्यक्तिहरूलाई फिर्ता लिनु परेमा, उहाँले तिनीहरूलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्छ ताकि तिनीहरू जीवित प्राणीहरू बनून् र उहाँले तिनीहरूलाई फिर्ता लिनैपर्छ ताकि तिनीहरू उहाँको ज्योतिमा बाँच्न सकून्। मृतकहरू ती हुन् जोसँग आत्मा हुँदैन, ती व्यक्तिहरू जो अत्याधिक रूपमा चेतनाशून्य छन् र जसले परमेश्‍वरको विरोध गर्छन्। तिनीहरू सबैभन्दा बढी परमेश्‍वरलाई नचिन्‍ने व्यक्तिहरू हुन्। यी मानिसहरूमा परमेश्‍वरको आज्ञापालन गर्ने रत्तीभर मनसाय हुँदैन; तिनीहरूले केवल उहाँको विरुद्ध विद्रोह गर्छन् र उहाँको विरोध गर्छन् अनि उनीहरूमा रत्तीभर पनि बफादारीता हुँदैन। जीवित व्यक्तिहरू ती व्यक्तिहरू हुन् जसका आत्माले पुनर्जन्म पाएका छन्, जसले परमेश्‍वरको आज्ञापालन गर्न जान्दछन् र जो परमेश्‍वरप्रति बफादार छन्। तिनीहरू सत्यता र साक्षी युक्त हुन्छन् र ती व्यक्तिहरू मात्र परमेश्‍वरको लागि उहाँको घरमा प्यारा हुन्छन्।
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको के तँ जीवित भएको व्यक्ति होस्? बाट उद्धृत गरिएको
४९१. अन्धकारको प्रभाव के हो? यो कथित “अन्धकारको प्रभाव शैतानको छल, भ्रष्टता, बन्धन र मानिसहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रभाव हो; शैतानको प्रभाव एउटा प्रभाव हो जसमा मृत्युको वातावरण हुन्छ। शैतानको राज्य–क्षेत्रमा जिउने सबै विनाशतिर उन्मुख हुन्छन्।
परमेश्वरप्रतिको विश्वास हासिल गरिसकेपछि तँ कसरी अन्धकारको प्रभावदेखि उम्कन सक्छस् त? तैँले एकपल्ट परमेश्वरलाई इमान्दारितापूर्वक प्रार्थना गरिसकेपछि आफ्नो हृदयलाई पूर्ण रीतिले उहाँतर्फ फर्काउँछस्, जुन बिन्दुमा तेरो हृदय परमेश्वरको आत्माद्वारा उत्प्रेरित हुन्छ। तँ आफैलाई पूर्ण रीतिले उहाँलाई दिन इच्छुक हुन्छस्, अनि यसै क्षणमा, तँ अन्धकारको प्रभावदेखि उम्केको हुनेछस्। यदि मानिसले गर्ने हरेक कुराले परमेश्वरलाई खुशी तुल्याउँछ र उहाँका मागहरूसित मेल खान्छ भने, ऊ परमेश्वरका वचनहरूभित्र र उहाँको हेरविचार तथा सुरक्षाको अधीनमा जिउने व्यक्ति हुन्छ। यदि मानिसहरूले परमेश्वरका वचनहरू अभ्यास गर्न सक्दैनन्, यदि तिनीहरूले उहाँप्रति लापरवाहीपूर्ण व्यवहार देखाउँदै अनि उहाँको अस्तित्वमा अविश्वास गर्दै, सधैं उहाँलाई मूर्ख बनाउने प्रयास गरिरहन्छन् भने— ती सबै मानिसहरू अन्धकारको प्रभावमुनि जिइरहेका हुन्छन्। परमेश्वरको मुक्ति नपाएका मानिसहरू शैतानको राज्य–क्षेत्रमा जिइरहेका हुन्छन्; यसको अर्थ, तिनीहरू सबै अन्धकारको प्रभावमुनि जिउँछन्। परमेश्वरमा विश्वास नगर्नेहरू शैतानको राज्य–क्षेत्रमा जिइरहेका हुन्छन्। परमेश्वरको अस्तित्वमा विश्वास गर्नेहरू पनि उहाँको ज्योतिमा नै जिइरहेका हुन्छन् भन्ने कुनै जरुरी छैन, किनकि उहाँमा विश्वास गर्नेहरू वास्तवमै उहाँका वचनहरूमा जिइरहेका नहुन सक्छन्, न त तिनीहरू परमेश्वरमा समर्पित हुन सकेका नै हुन्छन्। परमेश्वरमा विश्वास गर्ने कुरामा मानिस सीमित छ, अनि ऊसित परमेश्वरको ज्ञान नभएको कारणले, ऊ अझै पनि पुराना नियमहरूमा, मृत शब्दहरूको माझमा, एउटा यस्तो जीवन जिइरहेको छ जुन अँध्यारोर अनिश्चित छ, जुन न त परमेश्वरद्वारा पूर्ण रुपले शुद्ध गरिएको छ, न त उहाँद्वारा पूर्ण रुपले हासिल गरिएको छ। त्यसैकारण, यो स्पष्ट नै छ कि परमेश्वरमा विश्वास नगर्नेहरू अन्धकारको प्रभावमुनि जिइरहेका हुन्छन्, परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरू पनि अझै त्यसको प्रभावमुनि हुन सक्छन्, किनकि तिनीहरूसित पवित्र आत्माको कार्यको कमी छ। परमेश्वरको अनुग्रह वा कृपा प्राप्त नगरेकाहरू र पवित्र आत्माको कार्य देख्न नसक्नेहरू सबै अन्धकारको प्रभावमुनि जिइरहेका छन्; अनि धेरैजसो समय, परमेश्वरको अनुग्रहको मात्रै आनन्द लिने, तैपनिउहाँलाई भने नचिन्ने मानिसहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्। यदि एउटा मानिसले परमेश्वरमा विश्वास गर्दछ, तापनि आफ्नो अधिकांश जीवन अन्धकारको प्रभावमुनि जिइरहेको छ भने, यस मानिसले आफ्नो अस्तित्वको अर्थ नै गुमाएको छ–अनि परमेश्वरको अस्तित्व छ भन्ने विश्वास नगर्ने मानिसहरूको बारेमा उल्लेख गर्नु के खाँचो छ र?
परमेश्वरको कार्यलाई स्वीकार गर्न नसक्नेहरू, अथवा परमेश्वरको कार्यलाई स्वीकार गर्ने तर उहाँका मागहरूलाई पूरा गर्न असक्षम हुनेहरू सबै अन्धकारको प्रभावमुनि जिइरहेका मानिसहरू हुन। सत्यतालाई अनुसरण गर्नेहरू र परमेश्वरका मागहरू पूरा गर्न सक्षम हुनेहरूले मात्रै उहाँबाट आशिषहरू प्राप्त गर्नेछन्, र तिनीहरू मात्रै अन्धकारको प्रभावदेखि उम्किनेछन्। तिनीहरू जो स्वतन्त्र भएका छैनन्, जो सधैँ केही निश्चित कुराहरूद्वारा नियन्त्रित हुन्छन्, अनि जसले आफ्नो हृदय परमेश्वरलाई दिन असक्षम हुन्छन्, तिनीहरू मृत्युको वातावरणमा जिउने शैतानको बन्धनमुनि रहनेमानिसहरू हुन्। तिनीहरू जो आफ्नै कर्तव्यहरूप्रति अविश्वासयोग्य छन्, जो परमेश्वरको आज्ञाप्रति अविश्वासयोग्य छन् अनि जसले मण्डलीमा आफ्ना काम–कर्तव्यहरू पूरा गर्न चुक्छन्, तिनीहरू अन्धकारको प्रभावमुनि जिउने मानिसहरू हुन्। तिनीहरू जसले जानाजान मण्डली-जीवनलाई बिथोल्छन्, तिनीहरू जसले जानीबुझी आफ्ना दाजुभाइहरू तथा दिदीबहिनीहरूको माझमा बेमेलको बीउ रोप्छन् वा जसले गुट निर्माण गर्छन्, तिनीहरू अझै गहिरो अन्धकारको प्रभावमुनि, शैतानको बन्धनमा जिउने मानिसहरू हुन्। तिनीहरू जसको परमेश्वरसित असामान्य सम्बन्ध हुन्छ, जसको सधैँ अत्यधिक चाहनाहरू हुन्छन्, जसले सधैँ लाभ हासिल गर्न चाहन्छन्, र जसले आफ्नो स्वभावमा कहिल्यै रूपान्तरण खोजी गर्दैनन्, तिनीहरू अन्धकारको प्रभावमुनि जिउने मानिसहरू हुन्। तिनीहरू जो सधैँ बेहोशियार छन् अनि सत्यताको तिनीहरूको अभ्यासमा कहिल्यै गम्भीर हुँदैनन् र परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने कुरा खोजी गर्नुको सट्टामा तिनीहरूका आफ्नै देहलाई सन्तुष्ट गर्न खोज्दछन्, तिनीहरू पनि मृत्युको आवरणले ढाकिएको अन्धकारको प्रभावमुनि जिउने मानिसहरू हुन्। परमेश्वरको निम्ति काम गर्दा जो कुटिलता र छलमा संलग्न हुन्छन्, जसले परमेश्वरसित लापरवाहीपूर्ण ढङ्गले व्यवहार गर्छन्, जसले परमेश्वरलाई ठग्छन् अनि जसले सधैँ आफ्नै निम्ति योजना बनाउँछन्, तिनीहरू अन्धकारको प्रभावमुनि जिउने मानिसहरू हुन्। तिनीहरू जसले परमेश्वरलाई साँचो रीतिले प्रेम गर्न सक्दैनन्, जसले सत्यताको अनुसरण गर्दैनन्, अनि जो आफ्नो स्वभावलाई रूपान्तरणगर्ने कुरामा केन्द्रित हुँदैनन्, तिनीहरू सबै अन्धकारको प्रभावमुनि जिउने मानिसहरू हुन्।
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको अन्धकारको प्रभावदेखि उम्की, र तँ परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त गरिन सक्नेछस् बाट उद्धृत गरिएको
४९२. मानिस शरीरमा जिउँछ, जसको अर्थ ऊ मानव नरकमा, अनि परमेश्‍वरको न्याय र सजायविना मानिस शैतानजस्तै अशुद्ध छ। मानिसलाई कसरी पवित्र पार्न सकिन्थ्यो? परमेश्‍वरद्वारा दिइने सजाय र न्याय नै मानिसको सबैभन्दा उत्तम सुरक्षा र सबैभन्दा महान् अनुग्रह हो भन्‍ने विश्‍वास पत्रुसको थियो। परमेश्‍वरको सजाय र न्यायद्वारा मात्रै मानिस बिउँझन सक्छ र उसले शरीरलाई घृणा गर्न, शैतानलाई घृणा गर्न सक्छ। परमेश्‍वरको कठोर अनुशासनले मात्रै मानिसलाई शैतानको प्रभावबाट मुक्त गर्छ, उसलाई आफ्‍नै सानो संसारबाट मुक्त गर्छ, र उसलाई परमेश्‍वरको उपस्थितिको ज्योतिमा जिउन दिन्छ। सजाय र न्यायभन्दा उत्तम मुक्ति कुनै छैन। पत्रुसले यसो भन्दै प्रार्थना गरे, “हे परमेश्‍वर! जबसम्‍म तपाईंले मलाई सजाय दिनुहुन्छ र न्याय गर्नुहुन्छ, तबसम्‍म म तपाईंले मलाई छोड्नुभएको छैन भन्‍ने थाहा गर्नेछु। तपाईंले मलाई आनन्द वा शान्ति नदिनुभए तापनि, र मलाई कष्टमा जिउन दिनुभए तापनि, र ममाथि अनगन्ती सजायहरू दिनुभए तापनि, जबसम्‍म तपाईं मलाई छोड्नुहुन्‍न, तबसम्‍म मेरो हृदय सहजतामा हुनेछ। आज, तपाईंको सजाय र न्याय मेरो सबैभन्दा उत्तम सुरक्षा र मेरो सबैभन्दा महान् आशिष बनेका छन्। तपाईंले दिनुहुने अनुग्रहले मलाई सुरक्षा दिन्छ। आज तपाईंले मलाई दिनुहुने अनुग्रह तपाईंको धर्मी स्वभावको प्रकटीकरण हो, र सजाय र न्याय हो; यसको साथै, यो एउटा परीक्षा हो, र, त्योभन्दा पनि बढी, यो कष्टको जीवन हो।” पत्रुसले आफ्‍ना शरीरका सुख-चैनहरूलाई पन्छ्याएर गहन प्रेम र महान् सुरक्षाको खोजी गर्न सके, किनभने उनले परमेश्‍वरको सजाय र न्यायबाट अत्यन्तै धेरै अनुग्रह प्राप्त गरेका थिए। आफ्‍नो जीवनमा, यदि मानिस शुद्ध पारिन चाहन्छ र आफ्‍नो स्वभावमा परिवर्तन प्राप्त गर्न चाहन्छ भने, यदि उ अर्थपूर्ण जीवन जिउन र प्राणीको रूपमा रहेको आफ्‍नो कर्तव्य पूरा गर्न चाहन्छ भने, उसले परमेश्‍वरको सजाय र न्यायलाई स्वीकार गर्नैपर्छ, र आफूबाट परमेश्‍वरको अनुशासन र परमेश्‍वरको प्रहारलाई टाढा जान दिनु हुँदैन, ताकि उसले आफैलाई शैतानको चालबाजी र प्रभावबाट स्वतन्त्र गर्न सकोस्, र ऊ परमेश्‍वरको ज्योतिमा जिउन सकोस्। परमेश्‍वरको सजाय र न्याय नै ज्योति, र मानिसको मुक्तिको ज्योति हो, र मानिसको लागि योभन्दा उत्तम आशिष, अनुग्रह वा सुरक्षा कुनै छैन भन्ने जान। मानिस शैतानको प्रभावमा जिउँछ, र शरीरमा अस्तित्वमा छ; यदि उसलाई शुद्ध पारिएको छैन र उसले परमेश्‍वरको सुरक्षालाई प्राप्त गर्दैन भने, मानिस अझै भ्रष्ट बन्‍नेछ। यदि उसले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्न चाहन्छ भने, उसलाई धोइन र मुक्त गरिनैपर्छ। पत्रुसले प्रार्थना गरे, “परमेश्‍वर, तपाईंले मसँग दयालु व्यवहार गर्नुहुँदा म प्रसन्‍न हुन्छु, र सान्त्वनाको महसुस गर्छु; जब तपाईंले मलाई सजाय दिनुहुन्छ, म अझै बढी सान्त्वना र आनन्दको महसुस गर्छु। म कमजोर भए पनि, र मैले असीमित कष्ट सामना गरे तापनि, त्यहाँ आँसु र दु:ख भएतापनि, यो दु:खको कारण मेरो अनाज्ञाकारीता, र मेरो कमजोरी नै हो भन्ने तपाईं जान्नुहुन्छ। म बिलौना गर्छु किनभने म तपाईंका इच्‍छाहरूलाई पूरा गर्न सक्दिनँ, म शोक र अपसोसको महसुस गर्छु किनभने तपाईंका मापदण्डहरूका लागि म अपर्याप्त छु, तर यो क्षेत्र प्राप्त गर्न म इच्‍छुक छु, तपाईंलाई सन्तुष्ट गर्नको लागि मैले सक्‍ने सबै गर्न म इच्‍छुक छु। तपाईंको सजायले मलाई सुरक्षा दिएको छ, र मलाई उत्तम मुक्ति दिएको छ; तपाईंको न्यायले तपाईंको सहनशीलता र धैर्यतालाई ढाकेको छ। तपाईंको सजाय र न्यायविना, म तपाईंको कृपा र दयामा रमाउने थिइनँ। आज, तपाईंको प्रेमले स्वर्गहरूलाई माथ गरेको छ र अरू सबै थोकहरूलाई उछिनेको म अझै बढी देख्‍छु। तपाईंको प्रेम त कृपा र दया मात्रै होइन; त्योभन्दा पनि बढी, यो सजाय र न्याय हो। तपाईंको सजाय र न्यायले मलाई धेरै कुरा दिएको छ। तपाईंको सजाय र न्यायविना, एक जना व्यक्तिलाई पनि शुद्ध पारिँदैनथ्यो, र एक जना व्यक्तिले पनि सृष्टिकर्ताको प्रेमलाई अनुभव गर्नेथिएन। मैले सयौं परीक्षाहरू र संकष्टहरूको सामना गरेको, र म मृत्युको नजिक पुगेको भए तापनि, ती सबैले मलाई साँचो रूपमा तपाईंलाई जान्‍न र सर्वोच्‍च मुक्ति प्राप्त गर्न दिएको छ। यदि तपाईंको सजाय, न्याय र अनुशासन मबाट टाढा भएको भए, म अन्धकारमा, शैतानको अधिकार क्षेत्रमा जिउनेथिएँ। मानिसको शरीरसँग के लाभहरू छन् र? यदि तपाईंको सजाय र न्यायले मलाई छोडेको भए, यो तपाईंको आत्माले मलाई बिर्सिनुभएको जस्तो हुनेथियो, तपाईं मसँग त्यस उप्रान्त नहुनुभएको जस्तो हुनेथियो। त्यसो भएको भए, म कसरी जिइरहन सक्थेँ र? यदि तपाईंले मलाई रोग दिएर मेरो स्वतन्त्रतालाई लिनुभएको भए, म जिइरहन सक्थेँ, तर तपाईंको सजाय र न्यायले मलाई कहिल्यै छोडेको भए, म जिइरहने कुनै उपाय थिएन। यदि म तपाईंको सजाय र न्यायविना थिएँ भने, मैले तपाईंको प्रेमलाई गुमाउनेथिएँ, जुन प्रेम मेरो यति गहन् छ कि म त्यसलाई शब्‍दमा भन्‍न सक्‍दिनँ। तपाईंको प्रेमविना, म शैतानको अधिकार क्षेत्रमा जिउनेथिएँ, र तपाईंको महिमित अनुहारलाई देख्‍न असमर्थ हुनेथिएँ। म कसरी निरन्तर जिउन सक्थेँ र? मैले त्यस्तो अन्धकार, त्यस्तो जीवनलाई सहन सक्‍दिनँ थिएँ। तपाईं मसँग हुनु भनेको तपाईंलाई हेर्नु जस्तै हो, त्यसकारण म तपाईंलाई कसरी छोड्न सक्थेँ र? मेरो सबैभन्‍दा महान् सान्त्वनालाई मबाट नलैजानुहोस् भनेर म तपाईंलाई अनुरोध गर्छु, बिन्ती गर्छु, चाहे यो एक-दुई शब्‍दको निश्‍चयता नै किन नहोस्। मैले तपाईंको प्रेमको आनन्द लिएको छु, र आज म तपाईंबाट टाढा हुन सक्दिन; म तपाईंलाई प्रेम नगरिकन कसरी बस्‍न सक्थेँ र? तपाईंको प्रेमको खातिर मैले शोकका धेरै आँसु बगाएको छु, तैपनि यस्तो जीवन अझै अर्थपूर्ण छ, यसले मलाई अझै समृद्ध तुल्याउनसक्छ, मलाई अझै बढी परिवर्तन गर्नसक्छ, र सृष्टि गरिएका प्राणीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने सत्यतालाई प्राप्त गर्न यसले मलाई अझै बढि सक्षम तुल्याउँछ भन्‍ने कुरालाई मैले सँधै अनुभव गरेको छु।”
४९३. मानिसको देह शैतानको हो, यो विद्रोही स्वभावले भरिएको छ, यो निकै दुःखलाग्दो किसिमको फोहोर छ, र यो अशुद्ध कुरा हो। मानिसहरू देहको मनोरञ्जनको अति नै लोभ गर्दछन् र देहका प्रकटीकरणहरू धेरै छन्; यसैकारण परमेश्‍वरले मानिसको देहलाई केही हदसम्म तुच्छ ठान्नुहुन्छ। जब मानिसहरूले शैतानका फोहोर र भ्रष्ट थोकहरू फ्याँक्छन्, तिनीहरूले परमेश्‍वरको मुक्ति प्राप्त गर्छन्। तर यदि तिनीहरूले अझै आफूलाई फोहोर र भ्रष्टताबाट अलग गर्दैनन् भने, तिनीहरू अझै पनि शैतानको अधिकार क्षेत्रमा जिइरहेका हुन्छन्। मानिसहरूले गर्ने गुप्त सहायता, छलकपट र कुटिलपन सबै शैतानका कुराहरू हुन्। परमेश्‍वरले दिनुहुने मुक्ति तँलाई शैतानका यिनै कुराहरूबाट मुक्त गर्नका निम्ति हो। परमेश्‍वरको काम गलत हुन सक्दैन; यो सबै मानिसहरूलाई अन्धकारबाट मुक्त गर्नका लागि गरिन्छ। जब तैँले एक निश्चित बिन्दुसम्‍म विश्‍वास गरेको छस् र आफूलाई देहको भ्रष्टताबाट अलग गर्न सक्छस्, र अब उप्रान्त यो भ्रष्टताको बन्धनमा रहँदैनस्, तब के तैँले मुक्ति पाएको हुँदैनस् र? जब तँ शैतानको अधिकार क्षेत्रमा जिउँछस् तब तँ परमेश्‍वरलाई प्रकट गर्न असमर्थ हुन्छस्, तँ कुनै फोहोर वस्तु हुन्छस् र परमेश्‍वरको उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनस्। तँलाई शुद्ध पारिएपछि र सिद्ध बनाइएपछि, तँ पवित्र हुनेछस्, तँ एक सामान्य व्यक्ति हुनेछस्, र तैँले परमेश्‍वरबाट आशिष् पाउनेछस् र तँ परमेश्‍वरका निम्ति आनन्दको व्यक्ति बन्‍नेछस्।
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको अभ्यास (२) बाट उद्धृत गरिएको
४९४. मानिसले सम्पूर्ण जीवन शैतानको अधिकार क्षेत्रमा जिउँछ, र आफ्‍नै प्रयासद्वारा आफूलाई शैतानको प्रभावबाट मुक्त गर्न सक्‍ने एक जना पनि छैन। सबै नै अलिकति अर्थ वा मूल्य नै नभएको अशुद्ध संसारमा, भ्रष्टतामा र रिक्ततामा जिउँछन्; तिनीहरू शरीरको लागि, अभिलाषाको लागि, अनि शैतानको लागि त्यस्तो लापरवाही जीवन जिउँछन्। तिनीहरूको अस्तित्वमा अलिकति पनि मूल्य छैन। शैतानको प्रभावबाट आफूलाई मुक्त गराउने सत्यतालाई भेट्टाउन मानिस असक्षम छ। मानिसले परमेश्‍वरलाई विश्‍वास गर्ने र बाइबल पढ्ने गर्छ, तैपनि शैतानको प्रभावको नियन्त्रणबाट आफैलाई कसरी मुक्त गर्ने त्यो उसले बुझ्‍दैन। युगौँ-युगदेखि, अत्यन्तै थोरै मानिसहरूले मात्रै यो रहस्यलाई पत्ता लगाएका छन्, अत्यन्तै थोरैले मात्रै यसलाई बुझेका छन्। त्यसैले, मानिसले शैतानलाई घृणा गरे पनि, र शरीरलाई घृणा गरे पनि, शैतानको षड्यन्त्रपूर्ण प्रभावबाट आफैलाई कसरी मुक्त गर्ने त्यो उसलाई थाहा हुँदैन। आज, के तिमीहरू अझै पनि शैतानको अधिकार क्षेत्रमा छैनौ र? तिमीहरूले आफ्‍नो अनाज्ञाकारीताको कार्यहरूमा पछुतो गर्दैनौ, तिमीहरू अशुद्ध र अनाज्ञाकारी छौ भन्‍ने कुराको महसुस गर्नु त परै जाओस्। परमेश्‍वरको विरोध गरिसकेपछि, तिमीहरूको मनमा शान्ति हुन्छ र तिमीहरू ठूलो शान्ति महसुस गर्छौ। के तिमीहरूका शान्ति तिमीहरू भ्रष्ट भएकोले प्राप्त गरेका होइनौ र? के यो मनको शान्ति तिमीहरूको अनाज्ञाकारीताबाट आउँदैन र? मानिस मानव-नरकमा जिउँछ, ऊ शैतानको गाढा प्रभावमा जिउँछ; सारा मुलुकभरि, मानिसको शरीरलाई अतिक्रमण गर्दै भूतहरू मानिससँग जिउँछन्। पृथ्वीमा, तँ सुन्दर स्वर्गलोकमा जिउँदैनस्। तिमीहरू जिउने संसार दियाबलसको राज्य हो, यो एउटा मानव-नरक, मृतकहरूको संसार हो। यदि मानिसलाई शुद्ध पारिएन भने, ऊ अशुद्ध हुन्छ; यदि उसलाई परमेश्‍वरले सुरक्षा दिनुभएन र हेरचाह गर्नुभएन भने, ऊ अझै शैतानकै कैदी हुन्छ; उसलाई न्याय गरिएन र सजाय दिइएन भने, शैतानको गाढा प्रभावको दमनबाट उम्कने कुनै पनि माध्यम उसँग हुनेछैन। तैँले देखाउने भ्रष्ट आचरण र तैँले जिउने अनाज्ञाकारी आचरण नै तँ अझै पनि शैतानको अधिकार क्षेत्रमा छस् भन्‍ने कुरालाई प्रमाणित गर्नको लागि पर्याप्त छन्। यदि तेरो मन र विचारहरू शुद्ध पारिएका छैनन् भने, र तेरो स्वभावलाई न्याय गरिएको छैन र सजाय दिइएको छैन भने, तेरो समग्र अस्तित्व नै शैतानको अधिकार क्षेत्रद्वारा नियन्त्रित छ, तेरो मन शैतानको नियन्त्रणमा छ, तेरा विचारहरू शैतानको चालबाजीमा परेको छ, र तेरो सम्पूर्ण अस्तित्व शैतानका हातहरूको नियन्त्रणमा छ। तँ अहिले पत्रुसको मापदण्डहरूबाट कति टाढा छस् भन्‍ने कुरा के तँलाई थाहा छ? के तँमा त्यो क्षमता छ? आज तँलाई सजाय र न्यायको बारेमा कति थाहा छ? पत्रुसले जुन कुरालाई जाने त्यो तँमा कति छ? यदि तँ आज यसलाई जान्‍न सक्दैनस् भने, के तैँले भविष्यमा यो ज्ञान हासिल गर्न सक्‍नेछस् र? तँजस्तो अल्छी र कायर मानिस सजाय र न्यायको बारेमा जान्‍न असक्षम हुन्छ। यदि तैँले शरीरको शान्ति, र शरीरका सुख-चैनहरूलाई खोज्छस् भने, शुद्ध पारिन तँसँग कुनै माध्यम हुनेछैन, र अन्त्यमा तँ शैतानकहाँ नै फर्कनेछस्, किनभने तँ जे जिइरहेको छस् त्यो शैतान हो, र त्यो शरीर नै हो। आजको यस्तो अवस्थामा, धेरै मानिसहरूले जीवनको खोजी गर्दैनन्, जसको अर्थ तिनीहरूले शुद्ध पारिने बारेमा, वा जीवनको अझै गहन अनुभवमा प्रवेश गर्ने बारेमा तिनीहरू वास्ता गर्दैनन्। परिणामस्वरूप, तिनीहरूलाई कसरी सिद्ध पार्न सकिन्छ? जीवनको खोजी नगर्ने मानिसहरूसँग सिद्ध पारिने मौका छैन, र परमेश्‍वरको ज्ञानलाई खोजी नगर्नेहरू, आफ्‍नो स्वभावलाई परिवर्तन गर्ने कार्यको खोजी नगर्नेहरू, शैतानको गाढा प्रभावबाट उम्कन सक्दैनन्।
४९५. तिनीहरू सबै जसले परमेश्वरमा विश्वास गर्छन्, तापनि सत्यताको अनुसरण गर्दैनन्, तिनीहरूसँग शैतानको प्रभावदेखि उम्कने कुनै उपाय छैन। तिनीहरू जो इमान्दारितासहित आफ्नो जीवन जिउँदैनन्, जसले अरूको सामु एउटा प्रकारले व्यवहार गर्छन् तर तिनीहरूको पछाडि अर्कै प्रकारले व्यवहार गर्छन्, जसले नम्रता, धैर्यता तथा प्रेमको बाह्य रुप मात्रै देखाउँछन्, यद्यपि तिनीहरूको सार घातक, धूर्त र परमेश्वरप्रति वफादाररहित हुन्छ–त्यस्ता मानिसहरू अन्धकारको प्रभावमुनि जिउनेहरूका खास प्रतिनिधिहरू हुन्; तिनीहरू सर्पका वर्गका हुन्। तिनीहरू जसले सधैँ तिनीहरूका आफ्नै फाइदाको निम्ति मात्रै परमेश्वरमा विश्वास गर्छन्, जो स्वधर्मी र अभिमानी छन्, जसले देखावटी गर्छन्, अनि जसले आफ्नै हैसियतलाई रक्षा गर्छन्, तिनीहरू त्यस्ता मानिसहरू हुन् जसले शैतानलाई प्रेम गर्छन् र सत्यतालाई विरोध गर्छन्। यी मानिसहरूले परमेश्वरलाई विरोध गर्छन् र तिनीहरू पूर्ण रुपले शैतानका हुन्। तिनीहरू जसले परमेश्वरका बोझहरूलाई ध्यान दिँदैनन्, जसले सम्पूर्ण हृदयले परमेश्वरको सेवा गर्दैनन्, जोसित सधैँ तिनीहरूका आफ्नै स्व-रुचिहरू र आफ्नै परिवारका रुचिहरूको चासो हुन्छ, जो परमेश्वरको निम्ति तिनीहरू स्वयमलाई समर्पित गर्न हरेक कुरा त्याग्न असक्षम हुन्छन्, र जो कहिल्यै परमेश्वरको वचनद्वारा जिउँदैनन्, तिनीहरू परमेश्वरको वचनबाट बाहिर रहने मानिसहरू हुन्। त्यस्ता मानिसहरूले परमेश्वरको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्दैनन्।
जब परमेश्वरले मानिसहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले यस कारणले गर्नुभयो ताकि उनीहरूले उहाँको प्रशस्तताको आनन्द लिऊन् र उहाँलाई साँचो रीतिले प्रेम गरून्; यस प्रकारले मानिसहरू उहाँको ज्योतिमा जिउन सक्ने थिए। आज, ती सबै मानिसहरू जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैनन्, तिनीहरू उहाँका बोझहरूप्रति सावधान छ्रैनन्, तिनीहरूले आफ्नो हृदयलाई पूर्ण रीतिले उहाँलाई दिन सक्दैनन्, उहाँको हृदयलाई तिनीहरूका आफ्नै हृदय जस्तै गरी ग्रहण गर्न सक्दैनन् र उहाँका बोझहरूलाई आफ्नै जस्तै गरी काँध थाप्न सक्दैनन्—त्यस्ता कुनै पनि मानिसहरूमाथि परमेश्वरको ज्योति चम्कदैन र त्यसैकारण तिनीहरू सबै अन्धकारको प्रभावमुनि जिइरहेका छन्। तिनीहरू एउटा यस्तो बाटोमा छन् जुन पूर्णतया परमेश्वरको इच्छाको विपरीत छ, र तिनीहरूले गर्ने कुनै पनि कुरामा सत्यताको एउटा टुक्रा पनि छैन। तिनीहरू शैतानसितै हिलोमा लडिबुडी गरिरहेका छन्; तिनीहरू त्यस्ता मानिसहरू हुन् जो अन्धकारको प्रभावमुनि जिउँछन्। यदि तैँले सधैँ परमेश्वरका वचनहरू खान र पिउन सक्छस् र उहाँको इच्छाप्रति सावधान छस्अनि उहाँका वचनहरूलाई अभ्यासमा लगाउँछस् भने, तँ परमेश्वरको होस् र तँ उहाँको वचनहरूमा जिउने व्यक्ति होस्। के तँ शैतानको राज्य–क्षेत्रदेखि उम्किने र परमेश्वरको ज्योतिमा जिउँने इच्छा गरिरहेको छस्? यदि तँ परमेश्वरका वचनहरूमा जिउँछस् भने, पवित्र आत्माले आफ्नो काम गर्ने अवसर पाउनुहुनेछ; यदि तँ शैतानको प्रभावमुनि जिउँछस् भने, तैँले पवित्र आत्मालाई त्यस्तो कुनै अवसर दिने छैनस्। पवित्र आत्माले जुन काम मानिसहरूमा गर्नुहुन्छ, जुन ज्योति उहाँले तिनीहरूमाथि चम्काउनुहुन्छ र जुन निर्धक्क्ता उहाँले तिनीहरूलाई दिनुहुन्छ, त्यो केवल एक क्षणको लागि रहन्छ; यदि मानिसहरू सावधान छैनन् र तिनीहरूले ध्यान दिँदैनन् भने, पवित्र आत्माको कामले तिनीहरूलाई छोडिदिनु हुनेछ। यदि मानिसहरू परमेश्वरका वचनहरूमा जिउँछन् भने, पवित्र आत्मा तिनीहरूसित रहनुहुनेछ र तिनीहरूमा काम गर्नुहुनेछ। यदि मानिसहरू परमेश्वरका वचनहरूमा जिउँदैनन् भने, तिनीहरू शैतानको बन्धनमा जिउँछन्। यदि मानिसहरू भ्रष्ट स्वभावसहित जिउँछन् भने, तिनीहरूसित पवित्र आत्माको उपस्थिति वा काम हुँदैन। यदि तँ परमेश्वरका वचनहरूको सीमाहरूमा जिउँछस्, र यदि तँपरमेश्वरले माग गर्नुभएको अवस्थामा जिउँछस् भने, तँ यस्तो व्यक्ति होस् जो उहाँकै हो, अनि उहाँको काम तँमा सम्पन्न हुनेछ; यदि तँ परमेश्वरका मागहरूको सीमाहरूमा जिइरहेको छैनस् तर शैतानको राज्य–क्षेत्रमुनि जिइरहेको छस् भने, तँनिश्चय नै शैतानको भ्रष्टतामा जिइरहेको छस्। केवल परमेश्वरका वचनहरूमा जिएर अनि उहाँलाई आफ्नो हृदय दिएर तैँले उहाँका मागहरू पूरा गर्न सक्छस्; तैँले परमेश्वरका वाणीहरूलाई आफ्नो अस्तित्वको जग र आफ्नो जीवनको वास्तविकता बनाउदै उहाँले भन्नुभएको अनुसार गर्नैपर्छ; तब मात्रै तँ परमेश्वरको हुनेछस्। यदि तैँले वास्तवमै परमेश्वरको इच्छा अनुरूप अभ्यास गर्छस् भने, उहाँले तँमा काम सम्पन्न गर्नुहुनेछ, अनि तँ उहाँका आशिषहरूमुनि, उहाँको मुहारको ज्योतिमा जिउनेछस्; पवित्र आत्माले गर्नुहुने काम तैँले बुझ्नेछस् र परमेश्वरको उपस्थितिको आनन्द तैँले अनुभव गर्नेछस्।
४९६. अन्धकारदेखि उम्किन तँ परमेश्वरप्रति पहिले वफादार हुनैपर्छ र सत्यतालाई अनुसरण गर्न हृदयदेखि नै इच्छुक हुनुपर्छ; तब मात्रै तैँले सही अवस्था प्राप्त गर्न सक्छस्। सही अवस्थामा जिउनु अन्धकारको प्रभावदेखि उम्किनको निम्ति पूर्वआवश्यकता हो। सही अवस्थामा नहुनु परमेश्वरप्रति वफादार नहुनु हो, र सत्यता खोजी गर्न हृदयदेखि नै इच्छुक नहुनु हो; अनि त अन्धकारको प्रभावदेखि उम्कनु सवाल बाहिरको कुरा हुन्छ। अँध्यारो प्रभावहरूदेखि मानिस उम्किनको लागि मेरा वचनहरू आधार हुन्, अनि मेरा वचनहरू अनुसार अभ्यास गर्न नसक्ने मानिसहरू अन्धकारको प्रभावको बन्धनदेखि उम्कन सक्नेछैनन्। सही अवस्थामा जिउनु भनेको परमेश्वरका वचनहरूको अगुवाइमुनि जिउनु, परमेश्वरप्रति वफादारिताको अवस्थामा जिउनु, सत्यताको खोजी गर्ने अवस्थामा जिउनु, परमेश्वरको खातिर इमान्दारितापूर्वक आफैलाई समर्पित गर्ने वास्तविकतामा जिउनु र परमेश्वरलाई साँचो रीतिले प्रेम गर्ने अवस्थामा जिउनु हो। जो यस्तो अवस्थाहरूमा र यस वास्तविकतामा जिउँछन्, तिनीहरू सत्यताको गहिराइभित्र प्रवेश गरिदै गर्दा विस्तारै रुपान्तरण हुनेछन्, अनि काम गहिरो हुँदै जाँदा तिनीहरू रुपान्तरण हुनेछन्; अनि अन्त्यमा तिनीहरू निश्चय नै त्यस्ता मानिसहरू हुनेछन् जो परमेश्वरद्वारा हासिल गरिएका हुन्छन् र जसले उहाँलाई साँचो प्रकारले प्रेम गर्छन्। तिनीहरू जो अन्धकारको प्रभावदेखि उम्केका छन्, तिनीहरूले विस्तारै परमेश्वरको इच्छालाई सुनिश्चित गर्न सक्छन् र विस्तारै त्यसलाई बुझ्न थाल्छन्, अन्ततः तिनीहरू परमेश्वरका विश्वासपात्रहरू हुन्छन्। तिनीहरूले परमेश्वरको बारेमा कुनै धारणा मनमा नराख्ने र उहाँको विरुद्धमा कुनै विद्रोह नगर्ने मात्र होइन, तर तिनीहरूले अगि तिनीहरूलाई प्रभुत्व गरेको त्यस्ता धारणा तथा विद्रोहहरूलाई झन् बढी घृणा पनि गर्छन्, अनि परमेश्वरको निम्ति साँचो प्रेम तिनीहरूको हृदयमा उदय हुन्छ। मानिसहरू जो अन्धकारको प्रभावदेखि उम्कन असक्षम हुन्छन्, तिनीहरू सबै देहद्वारा पूर्णरूपमा भरिएका हुन्छन् र विद्रोहले भरिपूर्ण हुन्छन्; तिनीहरूका हृदयहरू जीविकाको निम्ति मानव धारणा तथा दर्शनशास्त्रहरू, साथै तिनीहरूका आफ्नै अभिप्राय तथा सोचविचारहरूले भरिएका हुन्छन्। परमेश्वरले चाहनुभएको कुरा मानिसबाटको अद्वितीय प्रेम हो; उहाँले चाहना गर्नुभएको कुरा मानिस उहाँका वचनहरूद्वारा र उहाँप्रतिको प्रेमले पूर्ण भएको हृदयद्वारा भरपूर भएको होस् भन्ने नै हो। परमेश्वरका वचनहरूमा जिउन, तिनीहरूले खोजतलास गर्नुपर्ने उहाँका वचनहरूमा खोज्न, उहाँका वचनहरूका निम्ति परमेश्वरलाई प्रेम गर्न, उहाँका वचनहरूका निम्ति दौडन, उहाँका वचनहरूका निम्ति जिउन—मानिसले हासिल गर्न प्रयास गर्नुपर्ने लक्ष्यहरू यिनै हुन्। हरेक कुरा परमेश्वरका वचनहरूमाथि निर्माण हुनुपर्छ; तब मात्रै मानिसले परमेश्वरका मागहरूलाई पूरा गर्न सक्नेछ। यदि मानिस परमेश्वरका वचनहरूले सुसज्जित छैन भने, ऊ केही होइन, केवल शैतानको कब्जामा परेको भुसुना हो! यसलाई तौल्: परमेश्वरको वचनले कतिसम्म तँभित्र जरा गाडेको छ? कुन कुराहरूमा तँ उहाँको वचनहरू अनुसार जिइरहेकोछस्? कुन कुराहरूमा तँ उहाँको वचनहरू अनुसार जिइरहेको छैनस? यदि परमेश्वरका वचनहरूले तँलाई पूर्ण रूपले पक्रेका छैनन् भने, कुन कुराले यथार्थमा तेरो हृदयलाई ओगटेको छ? तेरो दिनदिनको जीवनमा, तँ शैतानद्वारा नियन्त्रित भइरहेको छस् कि परमेश्वरको वचनहरूद्वारा ओगटिएकोछस्? के उहाँको वचनहरूको जगमाथि तेरा प्रार्थनाहरू आधारित भएका छन्? के परमेश्वरका वचनहरूद्वारा अन्तर्दृष्टि पाएर तँ आफ्नो नकारात्मक अवस्थादेखि बाहिर आएको छस्? परमेश्वरको वचनहरूलाई तेरो अस्तित्वको जगको रुपमा लिनु—यही नै हरेकजना प्रवेश गर्नुपर्ने कुरा हो। यदि उहाँका वचनहरू तेरो जीवनमा उपस्थित छैनन् भने, तँ अन्धकारको प्रभावमुनि जिइरहेको छस्, तैँले परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गरिरहेको छस्, तैँले उहाँको प्रतिरोध गरिरहेको छस् र तैँले उहाँको नाउँलाई अनादर गरिरहेको छस्। परमेश्वरप्रतिको त्यस्ता मानिसहरूको विश्वास पूर्ण रूपमा हानि र खल्बली मात्रै हो। तेरो जीवनको कति भाग उहाँको वचनहरूअनुसार जिइएको छ? तेरो जीवनको कति भाग उहाँको वचनहरूअनुसार जिइएको छैन? परमेश्वरको वचनले तँबाट माग गरेको कति जति तँमा पूरा भएको छ? कति जति तँमा हराएको छ? के तैँले त्यस्ता कुराहरूलाई नजिकबाट नियालेको छस्?
अन्धकारको प्रभावदेखि उम्किनुको निम्ति पवित्र आत्माको काम र मानिसको समर्पित सहकार्य दुवै आवश्यक हुन्छ। मानिस ठीक मार्गमा छैन भनी म किन भन्छु? ठीक मार्गमा भएका मानिसहरूले पहिले आफ्नो हृदय परमेश्वरलाई दिन सक्छन्। यो एउटा कार्य हो जसभित्र प्रवेश गर्न निकै लामो समय लाग्छ, किनकि मानवजाति सधैँ अन्धकारको प्रभावमुनि बाँचेको छ र हजारौँ वर्षदेखि शैतानको बन्धनमुनि रहेको छ। त्यसैकारण, यसभित्रको प्रवेश एक वा दुई दिनमा हासिल गर्न सकिँदैन। मानिसहरूले तिनीहरूका आफ्नै अवस्थालाई बुझ्न सकून् भनेर मैले यो विषय उठाएँ; जब मानिसले अन्धकारको प्रभाव के हो र ज्योतिमा जिउनु के हो भनी बुझ्दछ, तब प्रवेश गर्ने कुरा धेरै सजिलो हुन्छ। यो किनभने शैतानको प्रभावदेखि उम्किनुअघि यो के हो भनी तैँले जान्नुपर्छ; त्यसपछि मात्रै त्यसलाई फ्याँक्न तँसित उपाय हुनेछ। त्यसपछि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा, त्यो चाहिँ मानिसहरूको आफ्नै काम हो। हरेक कुराभित्र सकारात्मक पक्षबाट प्रवेश गर् र कहिल्यै निष्क्रिय भएर नपर्खि। केवल यस तरिकाबाट मात्रै तँ परमेश्वरबाट हासिल गरिन सक्नेछस्।
४९७. परमेश्‍वरले गर्नुहुने सबै कुरा आवश्यक र असाधारण महत्त्वका छन्, किनकि उहाँले मानिसमा गर्नुहुने सबै कामहरू उहाँको व्यवस्थापन र मानव जातिको मुक्तिसित सम्बन्धित हुन्छन्। स्वाभाविक रूपमा, अय्यूब परमेश्‍वरको नजरमा सिद्ध र इमानदार थिए र पनि उहाँले तिनमा गर्नुभएको काम पनि फरक छैन। अर्को शब्दमा, परमेश्‍वर चाहे जे गर्नु भए पनि वा जुनै साधनहरूद्वारा त्यो गर्नु भए पनि, मूल्य जति लागे पनि, उहाँको उद्देश्य जे नै भए पनि उहाँका कामहरूको उद्देश्य परिवर्तन हुँदैनन्। परमेश्‍वरको उद्देश्य मानिसमा, साथै मानिसका निम्ति रहेको उहाँका मागहरू र इच्छामा परमेश्‍वरका वचनहरू काममा लगाउनु हो; अर्को शब्दमा, यो भनेको परमेश्‍वरले उहाँका चरणहरूमा सकारात्मक भनी विश्‍वास गर्नुभएको काम मानिसभित्र गराउनु हो, जसले मानिसलाई परमेश्‍वरको हृदय बुझ्न र परमेश्‍वरको सार बुझ्न सक्ने बनाउँछ, र मानिसलाई परमेश्‍वरको सार्वभौमिकता र प्रबन्धहरू पालन गर्ने अनुमति दिन्छ, यसरी मानिसले परमेश्‍वरको भय प्राप्त गर्न सक्छ र खराबीबाट अलग बस्न सक्छ—परमेश्‍वरले गर्नुहुने सबै कार्यमा उहाँको उद्देश्यको एक पक्ष यो सबै हो। अर्को पक्ष यो हो कि, शैतान परमेश्‍वरको काममा प्रतिभार र सेवाको पात्र भएकोले मानिसलाई प्रायः शैतानको हातमा नै सुम्पिन्छ; मानिसहरूलाई शैतानका परीक्षाहरू र आक्रमणहरूमा शैतानको दुष्टता, कुरूपता र घिनलाग्दो अवस्था देखाई, मानिसहरूलाई शैतान घृणा गर्ने, अनि जे नकारात्मक छ त्यसलाई चिन्न र बुझ्न सक्ने तुल्याउनको लागि परमेश्‍वरले प्रयोग गर्नुहुने माध्यम यही हो। जबसम्म परमेश्‍वरको वचन, परमेश्‍वरको बारेमा तिनीहरूका ज्ञान र आज्ञापालन, परमेश्‍वरमाथिको तिनीहरूका विश्‍वास र उहाँप्रतिको भयको कारण, तिनीहरूले शैतानका आक्रमण र आरोपहरूमाथि विजय हासिल गर्दैनन्, तबसम्‍म यस प्रक्रियाले तिनीहरूलाई बिस्तारै शैतानको नियन्त्रण र आरोपहरू, हस्तक्षेप र आक्रमणहरूबाट स्वतन्त्र तुल्याउँछ; तब मात्र तिनीहरूले शैतानको अधिकार क्षेत्रबाट पूर्ण रूपमा छुटकारा पाउनेछन्। मानिसहरूको छुटकाराको अर्थ, शैतान हारेको छ भन्ने हो, यसको अर्थ, तिनीहरू अब शैतानको मुखको आहार हुँदैनन्—तिनीहरूलाई निल्नुको साटो शैतानले तिनीहरूलाई छोडिदिन्छ भन्‍ने हो। त्यस्ता मानिसहरू सोझा भएकाले, तिनीहरूसित विश्‍वास, आज्ञापालन, र परमेश्‍वरप्रति भय भएकोले, र तिनीहरू पूर्ण रूपमा शैतानबाट अलग भएकोले त्यस्तो हुन्छ। तिनीहरूले शैतानलाई लज्जित बनाउँछन्, तिनीहरूले शैतानलाई कायर बनाउँछन्, र तिनीहरूले शैतानलाई पूर्ण रूपमा पराजित गर्छन्। परमेश्‍वरलाई पछ्याउने, उहाँको आज्ञापालन गर्ने र उहाँको भय मान्ने तिनीहरूका दृढ विश्‍वासले नै शैतानलाई पराजित गर्छ, र शैतानलाई पूर्ण रूपमा तिनीहरूलाई त्याग्ने बनाउँछ। यस्ता मानिसहरू मात्र वास्तवमा परमेश्‍वरद्वारा साँचो रूपमा प्राप्त गरिएका हुन्छन्, र परमेश्‍वरले मानिसलाई बचाउनुको मुख्य उद्देश्य पनि यही हो। यदि तिनीहरू मुक्ति पाउन र परमेश्‍वरद्वारा पूर्ण रूपमा प्राप्त गरिन चाहन्छन् भने, परमेश्‍वरलाई पछ्याउनेहरू सबैले शैतानबाट आउने ठूलो र सानो दुवै परीक्षाहरू र आक्रमणहरूको सामना गर्नुपर्दछ। जो यी परीक्षाहरू र आक्रमणहरूबाट भएर जान्छन् र शैतानलाई पूर्ण रूपले पराजित गर्न सक्षम हुन्छन्, परमेश्‍वरद्वारा बचाइएकाहरू तिनीहरू नै हुन्। भन्नुको अर्थ, जो परमेश्‍वरमा बचाइएका हुन्छन् तिनीहरू परमेश्‍वरका जाँचहरूबाट भएर गएका, र शैतानका अनगन्ती परीक्षा र आक्रमणमा परेका मानिसहरू हुन्। जो परमेश्‍वरमा बचाइएका हुन्छन् तिनीहरूले परमेश्‍वरको इच्छा र मागहरू बुझ्दछन्, र उनीहरूले परमेश्‍वरको सार्वभौमिकता र प्रबन्धहरूलाई कुनै विरोध नगरी स्वीकार गर्न सक्छन्, र शैतानका परीक्षाहरूको बीचमा पनि तिनीहरूले परमेश्‍वरको भय मान्ने र खराबबाट अलग रहने मार्ग छोड्दैनन्। जो परमेश्‍वरमा बचाइएका हुन्छन् तिनीहरूमा इमानदारीता हुन्छ, तिनीहरू दयालु हृदयका हुन्छन्, तिनीहरूले प्रेम र घृणा बीच भिन्नता छुट्याउँछन्, तिनीहरूसँग न्यायको चेतना हुन्छ र विवेकशील हुन्छन्, र तिनीहरू परमेश्‍वरलाई वास्ता गर्न र परमेश्‍वरका सबै थोकलाई मूल्यवान् सम्झेर राख्न सक्षम हुन्छन्। त्यस्ता मानिसहरू शैतानद्वारा बाँधिँदैनन्, जासुसी वा दुर्व्यवहार गरिँदैनन्; तिनीहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन्छन्, तिनीहरू पूर्ण मुक्त र रिहा गरिएका हुन्छन्। अय्यूब त्यस्तै स्वतन्त्र मानिस थिए, र परमेश्‍वरले तिनलाई शैतानको हातमा सुम्पनुभएको महत्त्व पनि ठीक यही थियो।
४९८. अय्यूबको विश्‍वास, आज्ञाकारीता र शैतानलाई जितेको तिनको गवाही मानिसहरूका निम्ति ठूलो सहायता र उत्साहको स्रोत भएर आएको छ। अय्यूबमा तिनीहरूले तिनीहरूका आफ्नै मुक्तिको आशा देख्छन्, अनि विश्‍वास र आज्ञापालन साथै परमेश्‍वरको भयद्वारा शैतानलाई पराजित गर्न, शैतानमाथि विजय पाउन पूर्ण रूपमा सम्भव छ भनी बुझ्छन्। तिनीहरूले यो देख्छन्, कि जबसम्म उनीहरूले कुनै विरोध नगरी परमेश्‍वरको सार्वभौमिकता र प्रबन्धहरूलाई स्वीकार गर्छन्, जबसम्‍म सबै कुरा गुमाइसकेपछि पनि परमेश्‍वरलाई नत्याग्ने दृढ संकल्प र विश्‍वास गर्छन् तबसम्‍म उनीहरूले शैतानलाई लज्जित पार्न र पराजित गर्न सक्छन्, र उनीहरूले चाहे आफ्नो प्राण गुमाउन परे पनि शैतानलाई भयभीत बनाउन र तुरुन्तै धपाउन उनीहरूमा आफ्नो गवाहीमा दृढ भई खडा हुने संकल्प र दृढता मात्र हुनुपर्छ भनी बुझ्छन्। अय्यूबको गवाही पछिका पुस्ताहरूका लागि एउटा चेताउनी हो, र यो चेताउनीले उनीहरूलाई भन्छ कि यदि उनीहरूले शैतानलाई पराजित गरेनन् भने उनीहरूले शैतानका आरोपहरू र हस्तक्षेपबाट आफूलाई कहिल्यै पनि छुटकारा दिलाउन सक्‍ने छैनन्, न त उनीहरू कहिल्यै शैतानको दुर्व्यवहार र आक्रमणहरूबाट उम्कन नै सक्‍नेछन्। अय्यूबको गवाहीले पछिका पुस्ताहरूलाई अन्तर्दृष्टि प्रदान गरेको छ। यो अन्तर्दृष्टिले मानिसहरूलाई यो सिकाउँछ कि यदि उनीहरू सिद्ध र सोझो छन् भने मात्र तिनीहरू परमेश्‍वरको भय मान्न र खराबीबाट अलग बस्न सक्छन्; यसले उनीहरूलाई सिकाउँछ कि यदि उनीहरू परमेश्‍वरको भय मान्छन् र खराबीबाट अलग बस्छन् भने मात्र उनीहरूले परमेश्‍वरको बलियो र जोडदार गवाही दिन सक्छन्; यदि उनीहरूले परमेश्‍वरको निम्ति बलियो र जोडदार गवाही दिन्छन् भने मात्र उनीहरू कहिल्यै शैतानको नियन्त्रणमा हुन सक्दैनन् र परमेश्‍वरको अगुवाइ र सुरक्षाको अधीनमा जिउँछन्—तब मात्र उनीहरू वास्तविक रूपमा बचाइएका हुनेछन्। अय्यूबको व्यक्तित्व र तिनको जीवनको खोजलाई मुक्तिको खोजी गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले अनुकरण गर्नुपर्छ। तिनले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन जसरी जिए र जाँचहरूको अवधिमा तिनको आचरण जस्ता थिए, परमेश्‍वरको भय मान्‍ने र दुष्टताबाट अलग बस्‍ने मार्गको खोजी गर्नेहरूको लागि ती सबै अनमोल सम्पत्ति हो।
४९९. जब मानिसहरूलाई मुक्ति दिन बाँकी नै हुन्छ, तिनीहरूको जीवनलाई प्रायजसो शैतानले हस्तक्षेप र अनि नियन्त्रण समेत गरेको हुन्छ। अर्को शब्दमा, मुक्ति नदिइएका मानिसहरू शैतानका कैदीहरू हुन्, तिनीहरूसँग स्वतन्त्रता हुँदैन, शैतानले तिनीहरूलाई त्यागेको हुँदैन, तिनीहरू परमेश्‍वरको आराधना गर्न योग्य वा हकदार हुँदैनन्, र तिनीहरूलाई शैतानले नजिकबाट खेदो गरेको र भयानक आक्रमण गरेको हुन्छ। त्यस्ता मानिसहरूसँग बताउन सकिने कुनै खुसी हुँदैन, तिनीहरूसित बताउन सकिने सामान्य अस्तित्व हुँदैन, र यसबाहेक उनीहरूसँग बोल्‍ने कुनै मर्यादा हुँदैन। यदि तँ खडा भएर परमेश्‍वरमा भएको आफ्नो विश्‍वास र उहाँप्रतिको आज्ञापालन र परमेश्‍वरप्रतिको भयलाई जीवन र मृत्युका निम्ति लडाइँ गर्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै शैतानसित युद्ध गरिस् भने मात्र शैतानलाई पूर्ण रूपमा पराजित गर्छस्, अनि त्यसलाई पिठिउँ फर्काएर भाग्ने र तँलाई देख्दा डरछेरुवा बन्‍ने तुल्याउन सक्छस्, यसरी त्यसले तेरो विरुद्धका आक्रमणहरू र आरोपहरूलाई पूर्ण रूपमा त्याग्छ—तब मात्र तैँले मुक्ति पाउँछस् र स्वतन्त्र हुन्छस्। यदि तँ शैतानसित पूर्ण रूपमा अलग हुन चाहन्छस् तर शैतानलाई पराजित गर्न तँलाई सहायता गर्ने हात-हतियारहरूद्वारा सुसज्जित छैनस् भने तँ अझै पनि खतरामा नै हुन्छस्; समय बित्दैजाँदा, तँ शैतानद्वारा यति धेरै सताइन्छस् कि तँमा अलिकति पनि शक्ति बाँकी रहँदैन, तापनि तँ अझै पनि गवाही दिन असमर्थ छस्, तेरो विरुद्धका शैतानका आरोपहरू र आक्रमणहरूबाट अझै आफैलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र तुल्याएको हुँदैनस् भने, तब तँमा मुक्ति पाउने आशा निकै थोरै हुनेछ। आखिरीमा, जब परमेश्‍वरको कामको समाप्तिको घोषणा गरिनेछ, आफैलाई स्वतन्त्र पार्न नसक्‍ने गरी तँ अझै पनि शैतानको पकडमा नै हुनेछस्, र यसरी तँसँग कहिल्यै पनि मौका वा आशा हुनेछैन। त्यसकारण, यसको तात्पर्य भनेको, त्यस्ता मानिसहरू पूर्ण रूपमा शैतानको कैदमा परेका हुनेछन् भन्‍ने हो।
५००. मानिसहरूका निम्ति परमेश्‍वरको अनन्त प्रबन्ध र सहयोगको कामको अवधिमा उहाँले मानिसलाई आफ्नो सम्पूर्ण इच्छा र आवश्यकताहरूको बारेमा बताउनुहुन्छ र उहाँको काम, स्वभाव र उहाँसित के छ र को हुनुहुन्छ भन्‍ने मानिसलाई देखाउनुहुन्छ। यसको उद्देश्य मानिसलाई कदले सुसज्जित पार्नु हो, र मानिस परमेश्‍वरको पछि लाग्दा उसलाई उहाँबाट विभिन्न सत्यहरू प्राप्त गर्न दिनु हो—ती सत्यताहरू, जुन परमेश्‍वरले मानिसलाई शैतानसित लड्नका निम्ति दिनुभएका हतियारहरू हुन्। यसरी सुसज्जित भएपछि मानिसले परमेश्‍वरका परीक्षाहरूको सामना गर्नैपर्छ। परमेश्‍वरसित मानिसलाई परीक्षा गर्ने धेरै वटा साधन र उपायहरू छन्, तर ती सबैमा परमेश्‍वरको शत्रु शैतानको “सहकार्य” को आवश्यकता हुन्छ। भन्नुको अर्थ, मानिसलाई शैतानसँग लडाइँ गर्ने हात-हतियारहरू दिएपछि परमेश्‍वरले उसलाई शैतानको हातमा सुम्पिनुहुन्छ र शैतानलाई मानिसको कद “जाँच्ने” अनुमति दिनुहुन्छ। यदि मानिस शैतानको लडाइँ संरचनाबाट निस्कन सक्यो भने, यदि ऊ शैतानको घेराउबाट उम्केर अझै जीवित रहन सक्यो भने, मानिस त्यो जाँचमा सफल भएको हुन्छ। तर यदि मानिस शैतानको लडाइँको संरचना छोड्न असफल हुन्छ र शैतानको अगि आत्मसमर्पण गर्छ भने, तब ऊ त्यो जाँचमा सफल भएको हुनेछैन। परमेश्‍वरले मानिसको जुन सुकै पक्षलाई जाँच्नु भए पनि, उहाँको मापदण्डचाहिँ शैतानले आक्रमण गर्दा मानिस आफ्नो गवाहीमा दृढ रूपमा खडा हुन्छ कि हुँदैन, र शैतानको पासोमा परेपछि उसले परमेश्‍वरलाई त्यागेर शैतानको अगि समर्पित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै हुन्छ। यो भन्न सकिन्छ कि मानिस बाँच्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा उसले शैतानलाई जित्न र पराजित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ, र उसले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा परमेश्‍वरले शैतानसित लड्न उसलाई दिनुभएका हतियारहरू उठाउन सक्छ कि सक्दैन र शैतानलाई पूर्ण रूपमा आशारहित र एकलो बनाएर छोड्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। यदि शैतानले आशा छोडेर कसैलाई छोडेर जान्छ भने त्यसको अर्थ यही हुन्छ कि अब फेरि शैतानले त्यस व्यक्तिलाई परमेश्‍वरबाट खोस्ने कहिल्यै कोसिस गर्नेछैन, त्यस व्यक्तिलाई फेरि कहिल्यै पनि आरोप लगाउनेछैन र हस्तक्षेप गर्नेछैन, फेरि तिनीहरूलाई कहिल्यै पनि कष्ट दिन वा आक्रमण गर्न मात्र चाहँदैन; त्यस्ता व्यक्ति मात्र वास्तवमा परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त गरिएको हुनेछ। परमेश्‍वरले मानिसहरूलाई प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया यही हो।
५०१. आज, तिमी सिद्ध बनाइन वा तिम्रो बाहिरी मानवतामा परिवर्तन गर्न र तिम्रो क्षमतामा सुधार गर्न खोजी गर्न सक्छौ, तर प्रमुख महत्त्वको कुरा यो हो कि आज परमेश्वरले गर्नुहुने सबै कुराको अर्थ छ र त्यो लाभदायक छ भनी बुझ्न सक्नेछौ: यसले तिमी फोहोर देशमा जन्मेको व्यक्तिलाई फोहोरबाट उम्कन र ती फाल्न सक्षम बनाउँछ, यसले तिमीलाई शैतानको प्रभावलाई जित्न, र शैतानको अन्धकारको प्रभाव पछाडी छोडीराख्न सक्षम बनाउँछ। यी कुराहरूमा ध्यान दिँदा, तिमी फोहोरको यो देशमा सुरक्षित हुनेछौ। आखिरमा, तिमीलाई के गवाही दिन आग्रह गरिन्छ? तिमी फोहोरको देशमा जन्मेका छौ, तर तिमी पवित्र बन्न सक्षम छौ, र शैतानको क्षेत्रमा जिउनका निम्ति फेरि कहिल्यै फोहोरद्वारा दुषित हुँदैनौ, तर आफैलाई शैतानको प्रभावबाट छुटाउछौ, शैतानको कब्जा वा उत्पीडनमा पर्दैनौ, सर्वशक्तिमानका हातहरूमुनि जिउछौ। शैतानसितको लडाइँमा पाएको विजयको गवाही र प्रमाण यही नै हो। तिमी शैतानलाई त्याग्न सक्षम हुन्छौ, तिमी आफ्नो जियाइमा शैतानी स्वभावहरू प्रकट गर्दैनौ, बरु परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुहुँदा उहाँले माग गर्नुभएअनुसार जिउनेछौः सामान्य मानवता, सामान्य ज्ञान, सामान्य अन्तर्दृष्टि, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने सामान्य संकल्प, र परमेश्वरप्रतिको बफादारीता। यो परमेश्वरको एक प्राणीले वहन गर्ने गवाही हो। तिमी भन्छौ, “हामी फोहोरको देशमा जन्मिएका छौं, तर परमेश्वरको सुरक्षाको कारण, उहाँको नेतृत्वको कारण, र उहाँले हामीलाई जित्नुभएको कारण, हामीले आफैलाई शैतानको प्रभावदेखि छुटाएका छौं। आज हामीले आज्ञापालन गर्न सक्नु पनि परमेश्वरले हामीलाई जित्नुभएको प्रभाव हो, अनि यो हामी असल भएकोले, वा हामीले स्वाभाविक रूपले परमेश्वरलाई प्रेम गरेकोले होइन। परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभएकोले र हामीलाई पूर्वनियुक्त गर्नुभएकोले आज हामी जितिएका छौं, र उहाँको गवाही दिन सक्छौं, उहाँको सेवा गर्न सक्छौं; यसरी, उहाँले हामीलाई चुन्नुभएको र रक्षा गर्नुभएकोले पनि, हामी शैतानको क्षेत्रबाट बचाइएको र छुटाइएका छौं, अनि फोहोर पछाडि छोड्न र ठूलो रातो अजिङ्गरको देशमा शुद्ध हुन सक्छौं।”
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको विजयको कामको भित्री सत्यता (२) बाट उद्धृत गरिएको
५०२. आज, मैले भन्‍ने वचनहरूमा तँ विश्‍वास गर्दैनस्, र तिनलाई तैँले ध्यानै दिँदैनस्; जब यस प्रकारको काम फैलने दिन आउनेछ र तैँले यसलाई यसको सम्पूर्णतामा देख्‍नेछस्, तब तँ पछुताउनेछस्, र त्यो समयमा तँ हक्‍का न बक्‍क हुनेछस्। आशिष्‌हरू छन्, तैपनि तिनमा आनन्द लिन तैँले जान्दैनस्, र सत्यता छ, तैपनि तैँले यसको खोजी गर्दैनस्। के तैँले आफैमा तिरस्कार ल्याउँदैनस् र? आज, परमेश्‍वरको कार्यको अर्को चरण अहिलेसम्‍म सुरु नभइसकेको भए तापनि, तँबाट गरिएका मागहरू र तँलाई जिउन गरिएका आग्रहहरू कुनै पनि अनौठो कुरा होइनन्। काम धेरै छन्, र सत्यता धेरै छन्; के ती तैँले थाहा पाउन योग्य छैनन् र? के परमेश्‍वरको सजाय र न्याय तेरो आत्मालाई बिउँझाउन असक्षम छ? के परमेश्‍वरको सजाय र न्याय तँ आफैले आफैलाई घृणा गर्ने बनाउन असक्षम छ? के तँ शैतानको प्रभावमा रही शान्ति र आनन्द अनि थोरै शारीरिक सहजतामा जिउन पाउँदा सन्तुष्ट छस्? के तँ सबै मानिसहरूमध्ये सबैभन्दा नीच छैनस् र? मुक्तिलाई अवलोकन गर्ने तर यसलाई प्राप्त गर्नको लागि खोजी नगर्ने मानिसहरू जत्तिको मूर्ख अरू कोही पनि हुँदैन; आफैलाई शरीरमा मस्त पार्ने र शैतानमा आनन्द लिने मानिसहरू यिनै हुन्। परमेश्‍वरमाथिको तेरो विश्‍वासमा कुनै पनि चुनौतीहरू वा संकष्टहरू, वा थोरै कष्ट आउनेछैन भन्‍ने आशा तँ गर्छस्। तँ सँधै त्यस्ता कुराहरूको खोजी गर्छस् जुन व्यर्थ छन्, र तैँले जीवनलाई कुनै मूल्यको ठान्दैनस्, बरु सत्यताको सट्टा आफ्‍नै अनावश्यक विचारहरूलाई राख्छस्। तँ कति बेकामको छस्! तँ सुँगुरजस्तै जिउँछस्—तँ, अनि सुँगुरहरू र कुकुरहरूको बीचमा के भिन्‍नता छ र? सत्यताको खोजी नगरेर, शरीरलाई प्रेम गर्नेहरू सबै पशुहरू नै होइनन् र? आत्माविहीन रहेका मृतक मानिसहरू सबै जिउँदो लासहरू होइनन् र? तिमीहरूका बीचमा कति वचनहरू बलिएका छन्? के तिमीहरूका बीचमा थोरै काम मात्रै गरिएका छन्? तिमीहरूका बीचमा मैले कति जुटाएँ? त्यसो भए तैँले यसलाई किन प्राप्त गरेका छैनस्? तैँले केको बारेमा गुनासो गर्नु छ? के तैँले शरीरलाई अत्यन्तै धेरै प्रेम गर्ने हुनाले तैँले केही पनि प्राप्त गरेको छैनस् भन्‍ने कुरा साँचो होइन र? र के यो तेरा विचारहरू अत्यन्तै अनावश्यक भएकोले होइन र? के यो तँ अत्यन्तै मूर्ख भएकोले होइन र? यदि तँ यी आशिष्‌हरू प्राप्त गर्न असक्षम छस् भने, तँलाई मुक्ति नदिनुभएकोमा के तैँले परमेश्‍वरलाई दोष दिन सक्छस्?
५०३. परमेश्‍वर यस्तो वृहत् काम गर्नुहुन्छ र मानिसहरूको यो समूहलाई पूर्ण रूपमा मुक्ति दिनुहुन्छ, ताकि तैँले शैतानको प्रभावबाट मुक्त हुन, पवित्र भूमिमा बस्न, परमेश्‍वरको ज्योतिमा रहन, र ज्योतिको नेतृत्व र अगुवाइ पाउन सक्छस्। अनि त्यसपछि तेरो जीवनको अर्थ हुन्छ। तिमीहरूले जे खान्छौ र पहिरिन्छौ त्यो अविश्‍वासीहरूको भन्दा फरक हुन्छ; तिमीहरूलाई परमेश्‍वरका वचनहरूमा आनन्द लाग्छ, र तिमीहरू अर्थपूर्ण जीवन जिउँछौ—र तिनीहरू कुन कुरामा रमाउँछन्? तिनीहरूले केवल आफ्ना “पुर्ख्यौली सम्पदा” र “राष्ट्रिय भावना” मा आनन्द मनाउँछन्। तिनीहरूसँग मानवताको छाप रत्तीभर पनि हुँदैन! तिमीहरूका वस्त्र, बोलीवचन र कार्यहरू उनीहरूको भन्दा फरक छन्। आखिरमा, तिमीहरू पूर्ण रूपमा फोहोरबाट उम्‍कनेछौ, अब उप्रान्त शैतानको परीक्षाको पासोमा फस्नेछैनौ, र परमेश्‍वरको दैनिक प्रबन्ध प्राप्त गर्नेछौ। तिमीहरू सधैँ सतर्क हुनुपर्दछ। तिमीहरू फोहोर ठाउँमा बसे पनि तिमीहरूलाई फोहोरको दाग लागेको छैन र तिमीहरू परमेश्‍वरको महान् सुरक्षा पाउँदै उहाँको छेउमा बस्‍न सक्छौ। परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई पहेँलो देशका सबै मानिसहरू मध्येबाट चुन्नुभएको छ। के तिमीहरू सबैभन्दा धन्य व्यक्तिहरू होइनौ र? तँ एक सृष्टि गरिएको प्राणी होस्—तैँले अवश्य पनि परमेश्‍वरको आराधना गर्नुपर्छ र अर्थपूर्ण जीवनको खोजी गर्नुपर्छ। यदि तैँले परमेश्‍वरको आराधना गर्दैनस् तर तेरो आफ्नै फोहोर देहमा जिउँछस् भने, के तँ मानिसको वस्त्र धारण गरेको पशु हुँदैनस् र? तँ एक मानिस भएकोले तैँले आफैलाई परमेश्‍वरका निम्ति समर्पित गर्नुपर्छ र सबै दुःखहरू भोग्नुपर्छ। तँ आज जुन सानो दुःखमा परेको छस् त्यसलाई तैँले खुसी र दृढतासाथ स्वीकार गर्नुपर्छ, अनि अय्यूब र पत्रुसले जस्तो एक अर्थपूर्ण जीवन जिउनुपर्छ। यस संसारमा, मानिसले शैतानको वस्त्र लगाउँछ, शैतानबाट लिएर खान्छ, र शैतानकै फोहोरमा कुल्चीमिल्ची भई त्यसकै हुकुममा रही काम र सेवा गर्दछ। यदि तैँले जीवनको अर्थ बुझ्दैनस् वा साँचो मार्ग प्राप्त गर्दैनस् भने, यस्तो प्रकारले जिउनुको के महत्त्व हुन्छ र? तिमीहरू त्यस्ता मानिसहरू हौ जसले सही मार्गलाई पछ्याउँछन्, जसले सुधारका खोजी गर्छन्। तिमीहरू त्यस्ता मानिसहरू हौ जो ठूला रातो अजिङ्गरको देशमा खडा हुन्छन्, जसलाई परमेश्‍वरले धर्मी भन्नुहुन्छ। के त्यो सबैभन्दा अर्थपूर्ण जीवन होइन र?
अघिल्लो: ठ. कसरी परमेश्‍वरको सेवा गर्ने र उहाँको गवाही बन्‍ने सो सम्बन्धमा
अर्को: ढ. परमेश्‍वरद्वारा प्रदान गरिने स्वभाव परिवर्तन र सिद्धताको खोजी सम्बन्धमा